» शिल्पाको चरीत्रहरण गर्ने प्रकश सुबेदिको भयो पर्दाफास ! खुल्यो सबै रहस्य (भिडियो सहित) शिल्पाको चरीत्रहरण गर्ने प्रकश सुबेदिको भयो पर्दाफास ! खुल्यो सबै रहस्य (भिडियो सहित) – हाम्रो खबर
शिल्पाको चरीत्रहरण गर्ने प्रकश सुबेदिको भयो पर्दाफास ! खुल्यो सबै रहस्य (भिडियो सहित)
भिडियो तलको समाचारको अन्त्यमा छ ।माओवादी शान्ति प्रकृयामा आउन भन्दा एक बर्ष अगाडी उनी नेकपा माओवादीमा लागिन् । माओवादी सिद्धान्त बुझेर उनि बिद्रोहमा होमिएकी भने होइनन् । त्यती बेला सरकार र माओवादी दुवै पक्षले उनको घरमै पुगेर दुख दिन्थे ।